China SEBIC 20 inch aluminum zoro ezo batrị mpịachi igwe eletriki igwe eletriki na ndị nrụpụta | Funncycle
SEBIC 20 nke anụ ọhịa aluminom zoro ezo batrị mpịachi igwe eletrik
Otu enyi na enyi, nke na-eme ka ndị okenye na ndị na-eto eto mara mma, dị ike, ma wulite ya na ihe ndị dị oke mkpa iji gafee n'okporo ámá obodo siri ike. Dị fechaa ma inogide, ya foldable aluminum etiti nkume na-ina atụmatụ na n'elu ụdịdị. Igwe igwe di elu 250-watt. Agbatị agbara. Batrị lithium-ion 36V ewepu
Akụkụ ụkwụ 20 ″
Moto Brushless, 36V 250W N'azụ Motor-BAFANG
Nọmba nlereanya BEF-CL20
Ụba 20 * 1.75 ″ aluminom alloy 6061, TIG welded
Ndụdụ Steel TIG welded 20 ″
Crank Set Alloy crank ogwe aka ígwè yinye
Taya INNOVA 20 * 1.75 ″ A / V Black
Gaa ebe dị anya. N'ihi igwe 250W nke na-arụ ọrụ nke ọma, ndị na-agba ịnyịnya ruo 264 lbs nwere ike ịga njem ruru 15.5 kilomita na ike eletrik naanị. Gbanwee usoro ọsọ na ntinye nke bọtịnụ ma rute ọsọ ọsọ ọsọ ruo 18.6 mph. Na-achọ ịnọgide na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ chebe batrị? Pedal dị ka ịnyịnya ígwè ọdịnala wee gbanwee ọnọdụ ụkwụ na-aga iji merie ugwu dị elu ma ọ bụ nweta ngwa ngwa ngwa ngwa. Site na ike nke ịnyịnya ígwè SEBIC, imeri akara ogo 25 bụ egwuregwu ụmụaka.
Etinyela aka n’enweghị ike. Mepee batrị lithium-ion 36V ma gbanye ya na batrị nke abụọ (rere iche). Batrị na-ewepu nwere ike mejuputa ihe ọ juiceụ juiceụ mgbe ejiri ya ma ọ bụ detuo ya na etiti. N'ime nanị awa 3-4, eBike a na-ebu ọnụ ga-ejupụta ya ma dịkwa njikere ịtụgharị.
A kwadebere CL20 na taya jupụtara na ikuku na wiil 20 nke anụ ọhịa ahụ na-anapụta traction na nkwụsi ike ka mma. Okpokoro mmiri na-ebugharị na mbugharị na diski diski abuo iji mee ka CL20 nwee ịnyịnya ibu na-enweghị atụ na ike ịkwụsị ntụkwasị obi na-adịgide adịgide. Pụrụ iche “Nchekwa” teknụzụ breeki na-eme ka o doo anya na moto ahụ na-akwụsị mgbe brek na-etinye aka.
Ihe niile ịchọrọ maka njem zuru oke gụnyere n'ime igbe. Ergonomic paddle ekara grips na oche na-agbanwe agbanwe maka nkasi obi kachasị. A na-echebe igwe eletriki CL20 site na ikpo oke ọkụ site na ikpo ọkụ nke aluminom nke na-enyere aka ịhazi okpomọkụ nke moto ahụ.
Site na ịnyịnya ígwè eletriki CL20 nwere ike ogologo ogologo site na SEBIC, ịnyịnya gị ga-enweta nke ọma.
Nke gara aga: SEBIC 700c mid motor hydraulic brek n'okporo ụzọ igwe eletriki igwe
Osote: SEBIC 700C alloy alloy 6061 igwe eletrik dị ike
Egwuregwu Igwe Igwe Igwe Foldable